ဒီနေရာမှာ ရင်ဖွင့်ကြရအောင် - Myanmar in Singapore
Posted by Mr. Thinker on May 17, 2009 at 4:46am in ရင်ဖွင့်ရန် ကဏ္ဍများ
Permalink Reply by nyithuta on May 21, 2009 at 3:31pm thank all
i am new menber
Permalink Reply by nyithuta on May 21, 2009 at 3:38pm i don't know what shall i do? i doing every work is not easy.harrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Permalink Reply by mg mg hla nyunt on May 27, 2009 at 11:22am ၁ ပြီးရင် ၂ လာမယ် ။
ခင် ပြီးရင် ချစ် လာမယ်.............
၂ ပြီးရင် ၃ လာမယ်။
ချစ် ပြီးရင် မုန်းမှာလား..............................................
Permalink Reply by ခိုင်ဇော်မင်း (kaung zan win) on June 19, 2009 at 10:26pm အချစ်ဆုံးရှိပေမယ့်ဘာလို့အချစ်ဦးကိုမေ့လို့မရတာလဲ? "သူရောအဆင်ပြေရဲ့လား" လို့ဘာလို့တစ်ခါတစ်လေမေးမိနေရတာလဲ။ အချစ်ဦးကပဲအချစ်ဆုံးဖြစ်နေလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် "ငယ်ကချစ်အနှစ်တစ်ရာမမေ့" ဆိုတဲ့စကားပုံကြောင့်ပဲလား။
Permalink Reply by Than soe on April 26, 2011 at 1:59am Yes! I think, First love is your real love which made your heart alive. It was your origin of love. The following love are just pretending love. We all are pretending in the pretend life. ခိုင်ဇော်မင်း (kaung zan win) said:အချစ်ဆုံးရှိပေမယ့်ဘာလို့အချစ်ဦးကိုမေ့လို့မရတာလဲ? "သူရောအဆင်ပြေရဲ့လား" လို့ဘာလို့တစ်ခါတစ်လေမေးမိနေရတာလဲ။ အချစ်ဦးကပဲအချစ်ဆုံးဖြစ်နေလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် "ငယ်ကချစ်အနှစ်တစ်ရာမမေ့" ဆိုတဲ့စကားပုံကြောင့်ပဲလား။
Permalink Reply by Sai Sheng Hein on July 6, 2012 at 8:46pm The first cut is the deepest !!!!The first love is the sweetest !!!!
Permalink Reply by Knight on June 29, 2009 at 10:28pm bal lo sa pwint ya ma lae?? myar loon lo :(
Permalink Reply by June Rain on July 1, 2009 at 2:08am sate nyit nay dar dop ta gal bar bat. di tine htar lite tar bat kg ma lar.amyar gyi bat. pyaw yin. :'(
Permalink Reply by maythetkhaing on July 4, 2009 at 9:17pm thuakhu bar load nay lae.ga ya ma sight tat tar lar.bar loe lae...........................
Permalink Reply by hanhtoolwin on July 6, 2009 at 11:51am thank you.
Permalink Reply by yon ko san on July 13, 2009 at 9:09pm အရမ်းခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဗျာ ။ နေမကောင်းဘူးလို့စာရေးပြီး ကျွန်တော်ကတော့ အော်...သူနေမကောင်းနေတာပဲလေလို့ထင်နေတာ။ သူက နေမကောင်းဘူးသာဆိုတယ် ဂိမ်းတော့ဆော့နိုင်တယ်ဗျာ။ နေကောင်းရက်သားနဲ့ စိတ်ပူနေရတဲ့သူကို စာလေးတောင်ပြန်မရေးဘူးဗျာ။ စာတစ်လုံးနှစ်လုံးလေးလောက်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ မအားပဲနေပါစေ ပြန်ရေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အဲဒီအတွက် အရမ်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
Permalink Reply by Khin Lay on July 21, 2009 at 12:54pm အချစ်ကံဆိုးသူလို့ပဲပြောရမလားပဲ .အရမ်းမွန်းကြပ်တယ် .ဘ၀ကို ရှေဆက်ဖို့ခွန်းအားတွေတောင်ပျောက်ကုန်ပါပြီ .ရင်ဖွင့်စရာနေရာလေး တစ်ခုရလို့ကံကောင်းသွားသလိုပဲ
2. အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျား၏ မယ်မြ
5. ခြောက်ပြစ်ကင်း လူသားများနှင့်နိုင်ငံ့အရေး
6. ယောက်ျား-မိန်းမ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ နိယာမသဘောတရား (အပိုင်း- ၂)
7. “လေထဲတွင်လွင့်ပျံ့ ခဲ့သော လွင့်ပျံ့နေဆဲဖြစ်သော”
9. လိုတာပေး၏ မပေး၏ လိုတာရ၏မရ၏
10. အမှန်တကယ်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသင့်တဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်လား!
11. ဖခင်များနေ့ဂုဏ်ပြုခြင်း (ခူနာ - ရေးသူ၊ ကိုကိုကြီး)